သချင်္ာဆိုင်ရာ ဉာဏ်စမ်းများ - MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life › quiz ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
kotinhlaing March 2011 edited April 2011 in quiz ၁။ ၈ ဂဏန်း ၈ လုံးကို အသုံးပြုပြီး သချင်္ာနည်းဖြင့် ၁၀၀၀ ရအောင် ဘယ်လိုရှာကြမလဲ? မှတ်ချက်များ
aunggyi March 2011 edited March 2011 Registered Users 888 + 88 + 8+ 8 + 8 = 1000 တော်တော်ခက်တယ်ဗျ ဂူးဂယ်မှာ တချက်ဘယ် :tongue: tanugpawthar March 2011 edited March 2011 Registered Users ကဲ ဒါ ဆို ၂ ဂဏန်း ၅ လုံးကို အဖြေ ၁၁ ရအောင်လုပ်ပေးပါ (သချာင်္ နည်းအရ ကြိုက်သလို ပေါင်းနုတ်မြှောက်စား လုပ်နိုင်တယ် လိုအပ်ရင် Calculator ပါ သုံးနိုင်ပါတယ်) kotinhlaing March 2011 edited March 2011 Registered Users (2)5ဂဏန်း5လုံးနဲ့ အဖြေ ၃၇ (3)0ဂဏန်း5လုံးနဲ့ အဖြေ ၁၂၀ aunggyi March 2011 edited March 2011 Registered Users 22 into2= 44 /2 into2= 11 silence April 2011 edited April 2011 Registered Users kotinhlaing;83684 said:(2)5ဂဏန်း5လုံးနဲ့ အဖြေ ၃၇ ANS : = ((5+5)/5 )^5 +5 = ((10)/5 )^5 +5 = 2^5 +5 = 32 +5= 37
kotinhlaing;83684 said:(3)0ဂဏန်း5လုံးနဲ့ အဖြေ ၁၂၀
ANS:=(0! + 0! + 0! + 0! + 0!)! =(1 + 1 + 1 + 1 + 1)!=(5)!=120Note: 0!=1 Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla